Global Voices teny Malagasy » Pero: Lahatsary Ahitana ny Fihetsiketseham-panoherana ny Fitrandrahana, Andiany I · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Desambra 2011 16:13 GMT 1	 · Mpanoratra Juan Arellano Nandika (en) i Silvia Viñas, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Però, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika
Tsy ilaozan'ny kolikoly ny orinasam-pitrandrahana lehibe . Miresaka ny fangatahan'ilay orinasam-pitrandrahana Newmont Mining Corporation (izay mitantana ny volamena ao Yanacocha ) fanampiana avy amin'ilay gadra Vladimiro Montesinos  ny lahatsary, mba handaminana ny raharaham-pitsarana hiarovana azy ireo, miaraka amin'ny fanohanan'ny Sampan-draharaham-panjakana Etazonia sy ny CIA. Fanadihadiana an-tsary 2005 FRONTLINE/World, antsoina hoe ‘Ny ozon'ny volamena Inca’ (La Maldición del oro inca), no novokarin'ilay mpanao gazety ao amin'ny New York Times, Lowell Bergman.
Mitohy amin'ity lahatsary manaraka ity ny tantara, izay mitodika tamin'ny fotoana nahazoan'ny Espanola azy ary mitantara ny zava-niseho tao Cajamarca  , Inca, ilay antsoina hoe Atahualpa  nanokatra efitra feno volamena ho an'ny Espanola, ho solon'ny fahafahany, novonoin'ny Espanola anefa izy rehefa azony ny volamena. Mampiseho ny tranga tao Choropampa  ihany koa ity lahatsary ity, izay ahitana ny fiantrakain'ny merkiora eny amin'ny vahoaka, sy ny tranga tao Cerro Quilish , izay niteraka ady teo amin'ny vahoaka sy ny Yanacocha.
Mifarana ao amin'ny tapany fahatelo  fohifohy ny horonantsary fanadihadiana.
Na dia misy ifandraisan'ny amin'ny Yanacocha koa aza ny olana ankehitriny ao Cajamarca, dia mikasika ireo karazana tetikasa izay voalaza ao amin'ny horonantsary teo aloha koa izany. Mikasika ny tetikasa fitrandrahana ataon'ny Conga no tena olana , izay mety hanimba ireo renirano marobe ao an-tampon-ketsan”i Cajamarca. Vondrona fikambanana firaisamonim-pirenena Cajamarca no namokatra ity lahatsary ‘Tsy mila Conga’ ity, izay mamaritra ny olana ara-tontolo iainana sy rano ao amin'ny faritra.
Afaka tsidihana eto  sy eto  ny fizarana voalohany sy faharoa amin'ny horonantsary fanadihadiana.
Lahatsoratra navoaka tao amin'ny bilaogy manokana an'i Juan Arellano tamin'ny 7 Desambra 2011 .
Sary mampiseho mazava tsara ny fitrandrahana ao Yanacocha, ao Pero. Sary avy amin'ny mpisera Flickr elmorsa  (CC BY-NC-SA 2.0).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/12/18/26547/
 tapany fahatelo: http://www.youtube.com/watch?v=YGm-krMz9E8
 7 Desambra 2011: http://www.arellanojuan.com/las-protestas-contra-conga-y-la-mineria-en-videos-i/